ऊर्जा, उत्साह र प्रेरणाका पुञ्‍ज
२०७६ बैशाख १ आइतबार १६:१७:००
जिन्दगी ऊर्जा, उत्साह, प्रेरणाको संगम हो । यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हुनहुन्छ – शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी । उहाँलाई थोरै पटक भेटेको छु तर भेटैपिच्छे उहाँको ज्ञान, स्मरण र उदारताबाट अभिभूत भएको छु । जीवित नेपालीमध्ये सबैभन्दा आदरणीय जोशीको ज्ञान, कौशल तथा जीवन बाँच्ने कला र उहाँका संग्रहहरु जति सक्यो उति हामीले लिनुसक्नु पर्छ । राज्यले पनि यसलार्ई जीवन्त राख्नुपर्छ ।
यसपटकको भेटमा कुनै काम गरेपछि त्यसको जस कसरी लिने गरिन्छे भन्ने विषयमा उहाँले एउटा प्रसङ्ग सुनाउनु भयो । ‘‘ म तपाईँलाई २००८—२००९ साल तिरको कुरा भन्छु । सरकारले जनगणना गर्ने निर्णय गर्यो । नेपालमा पहिलो जनगणना सन् १९११ मा भएको मानिन्छ र तर वैज्ञानिक भने सन् १९५२–५४ (विस २००८—२०११) मा भएको जनगणनालाई मानिन्छ । यो जनगणना गर्दा न त नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा यही नै हो भन्ने अवस्था थियो न त जिल्लाहरु नै छुट्टिएका थिए । कुन जिल्लाको सीमा कहाँदेखि कहाँसम्म हो भन्ने नै थिएन ।
यस्तो अन्योलबीच जनगणना गर्ने कामको जिम्मा आइलाग्यो सत्यमोहन जोशी लगायतका ५ जनालाई । टोलीका अन्य सदस्यमा थीरबहादुर रायमाझी, केशरबहादुर आचार्य, हृदयनाथ अधिकारी तथा नरकान्त अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । दिल्लीमा जनगणनासम्बन्धी तालिम लिएका कारण उहाँहरु त्यस टोलीमा पर्नुभएको थियो । पछि जोशी जनसंख्यासम्बन्धी अध्ययन गर्न न्युजिल्यान्ड पनि जानुभयो ।
माथि भनिएजस्तै त्यति बेला न सीमा छुट्टिएको थियो न त गणनाका आधारहरु नै तय गरिएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको जनसंख्या महाशाखा (UN Population's Division) को सर्त तथा प्रक्रियाका आधारमा काम अगाडि बढाउने सहमति समूहले गर्यो । त्यसपछि नक्सा बनाउनु पर्ने भयो र सोहीअनुसार नक्साको खाका बन्यो, प्रगन्ना, जिल्ला छुट्टिए । काम गर्नै पर्ने भएपछि कहीँ न कहीँबाट त सुरु गर्नै पथ्र्यो !
नक्साको खाका त बन्यो तर यसलाई जिल्ला, प्रगन्ना छुट्टिएको रंगीन नक्सा बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेछ उहाँलाइ । अनि दिलबहादुर चित्रकारलाई त्यो बनाउने कामको जिम्मा दिनु भयो । फेरि अर्को समस्या आइलाग्यो, त्यसबेला क्यानभास नै नपाइने । बेलायतबाट क्यानभास झिकाइयो र ओइल पेन्टिङ्ग नक्सा बन्यो । सबै जिल्ला अलग अलग रंगमा ! हाम्रो देश, जिल्लाहरु सबै भएको । पहिलोपटक ! कल्पना गरौँ न जब देशले आकार पायो, अनि मान्छेहरुले आफू कुन जिल्लाको, त्यो कहाँ पर्छ अनि अरु नाम सुनेका र नसुनेका जिल्लाहरु कहाँ छन्, देशको सीमा कस्तो छ खुट्टयाइएको त्यो क्षण । इतिहास निर्माण भएको त्यो घडी ।
विसं २००९ मा परोपकार संस्थामा पहिलोपटक भएके राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा त्यो नक्सा देख्दा आउने सबै तीन छक भए । देशको आन्तरिक तथा बाह्य सीमासहित जिल्लाहरु देख्दा ! हाम्रो जिल्ला त यहाँ रहेछ, ए भोजपुर त यता पो रहेछ; मानीसहरुको ठूलो जिज्ञासा, कौतुहलता त्यसले शान्त पार्यो, देशको भूगोलको बारेमा मान्छेहरु प्रष्ट भए । त्यही जनगणनाका आधारमा निर्वाचन भयो । सारालाई यो काम लाग्यो विभिन्न प्रयोजनमा । यो मुलुककै पहिलो वैज्ञानिक जनगणना बन्यो ।
त्यही कामका लागि त्यसैबखत पहिलोपटक संख्या विभाग बन्यो जुन हालको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग हो । त्यो जनगणना २० दिनमा गरिएको थियो । काठमाडौं बसन्तपुरको कुमारीघरको दुईवटा लङ्गमा तथ्यांक तयार गरिएको थियो कोचाकोच गरेर । सबै काम हातले लेखिएको थियो । आज हामी त्यसरी काम गरेको कल्पना पनि गर्न सक्तैनौ । जनसंख्या गणना गर्न धनकुटा जान रक्सौलहुँदै फारबिसगन्ज र डोटी जान रक्सौलबाट बहराइच भएर गएका थिए गणकहरु ।
त्यसरी खटेर इतिहास कोर्ने पाँच जनामा दुईजना मात्र जीवित हुनुहुन्छ हालसम्म – सत्यमोहन जोशी र नरकान्त अधिकारी । नरकान्त अधिकारी बिरामी हुनुहुन्छ । एकमात्र अझै सक्रिय सत्यमोहन जोशीमात्र हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय जनगणनाको जग बसाल्ने त्यस्ता व्यक्तित्वहरुका बारेमा र जनगणनाको त्यो दुरुह तथा जीवन्त प्रक्रियाका बारेमा तथ्यांक विभागले न त कुनै दस्तावेज बनाएको छ न त कुनै खोजखबर नै । सराहना, कृतज्ञता तथा सम्मान गर्न नजान्ने वा कञ्जुस्याँइ गर्ने हाम्रो संस्कारले कहिल्यै पनि भलो गर्दैन । कुनै साइत नहेरी तथ्यांक विभागले सत्यमोहन जोशीसँग सम्पर्क गरेर त्यो ऐतिहासिक कामको र त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तित्वहरुको अभिलेख बनाउनुपर्छ । जीवित हुँदासम्म केही नगर्ने अनि बेला बितिसकेपछि आँशु झार्नुको के तुक? अनि त्यो ऐतिहासिक पेन्टिङ खोजी गरी सार्वजनिक प्रदर्शनीका लागि राखिनुपर्छ । त्यो हाम्रा सन्तानका लागि उपहार हो अग्रजहरुका तर्फबाट । त्यो नासो हराउनु वा नासिनु हुँदैन ।
अब सुरुमा उठाइएको कामको जसअपजसको कुरा गरौँ । त्यस प्रदर्शनीमा सबैभन्दा उत्कृष्ट ठहरिएर त्यही तैल चित्रले पहिलो पुरस्कार पायो । र पुरस्कार लिन समूहकै अर्को सदस्यलाई बोलाइयो । मनमा कतै खिन्नता आयो, कामको नेतृत्व गरेको मैले, अवधारणा मेरो, तर पुरस्कार त आर्कैले पो थाप्यो भनेर । अहिले आएर सम्झदा लाग्छ त्यस्तो स्वार्थी /क्षुद्र बुद्धि किन आयो मेरो मनमा ? पात्रभन्दा जहिले पनि काम पो मुख्य हो त ! कामले त्यत्रो सम्मान, पहिचान पाउँदा पुगिहाल्यो नि । अनि कामको कुरा हुँदा त पात्रको विषय त कतै न कतै आइहाल्छ ।
हो हाम्रोजस्तो मुलुकमा कुनै पनि कुराको महत्त्व बुझेर अभिलेख राख्ने र कामको पहिचान तथा सम्मान गर्ने परिपाटी बिरलै छ । त्यसैले कति त्यस्ता राम्रा कामहरु सँगसँगै सर्जक तथा मुख्यकर्ता ओझेलमा पर्छन् । पद्धति बसाल्नु पर्यो यस्ता कामहरुमा ता कि कोही पनि ओझेलमा नपरोस्, कसैमाथि अन्याय नहोस् । त्यसैले तपाईँहरुले पनि काम गर्दा नामभन्दा पनि गुणस्तरीय काम गर्नुस्, नामको पछाडि कहिल्यै नलाग्नस् । अनि गरेको कामको सफलतामा रमाउनुस् । व्यक्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै तर जहिले पनि काम मूल कुरा हो । म, मेरो, मैले भन्ने भावबाट बाहिर निस्केर सामूहिकतामा बाँच्न सिक्नुपर्छ ।
(श्रद्धेय सत्यमोहन जोशीसँग भएको कुराकानीमा आधारित रहेर यो लेख तयार गरिएको छ । इतिहासको गर्भमा लुकेको पक्ष उजागर गर्ने उद्देश्यले यो लेख लेखिएको हो । )